Cadaadiska la saaray Cabdi Xaashi oo laga digay arrin halis oo ay horseedi karto | Warkii.com
Home warkii Cadaadiska la saaray Cabdi Xaashi oo laga digay arrin halis oo ay...
Cadaadiska la saaray Cabdi Xaashi oo laga digay arrin halis oo ay horseedi karto
Senataro Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa qofka ugu sareeyo dadka matala gobalada Waqooyi ee Soomaaliya (Somaliland) ee ku jira dowladda Somaliland.
Guddoomiye Cabdi Xaashi dadka yaqaana waxey ku tilmaamaan shaqsi dagan, Afgaaban, waddani ah, aad uga shaqeeyo wadajirka labada gobal, islamarkaana dowladnimo jecel.
Xilal kala duwan ayuu dalkaan ka soo qabtay waxaana la sheegaa inuu yahay qof kasbaday dhamaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan siyaasiintii iyo bulshadii uu la shaqeeyay.
Dhowrkii bil ee la soo dhaafay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cadullaahi waxa uu wajahayaa cadaadis badan oo halis ku ah wadajirka Qaranimada Soomaaliyeed waxaana bilaawday qeyla dhaan badan oo ka soo baxeyso dadka waqooyi ee daneeya wadajirka Soomaaliya iyo Somaliland.
Siyaasiin badan iyo aqoonyahaano ka soo jeeda degaanada Somaliland ayaa sheegay in Cabdi Xaashi yahay astaanta goballada Waqooyi ee hada ku sugan koonfur, dhibkii gaarana uu saameen karo mustaqbalka labada dhinac.
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqoonyahaanka Soomaaliyeed ayaa arintaan ku tilmaamay kufsi siyaasadeed oo keeni kara dagaalo sokeeye iyo kalatag hor leh.
“Waxa ay wadaan Farmaajo iyo taliska NISA, waa kufsi siyaasadeed waxeyna keeni doonaan kala tag iyo colaad sokeeye in dalka dib ugu laabta, haddii aan hada laga gaarin,” ayuu yiri Prof Cabdi Ismaaciil Samatar.
“Cabdi Xaashi dadka koonfurta waxay ku tilmaamaan nin wadani ah dhib badneen afgaaban, kuwa Waqooyina waaba astoontooda koofurta u joogto, hab dhaqanka xun ee loo geestay waxey abuuri kartaa in wadajirkii sii fogaado lana sii kala tago,” ayuu yiri Prof Cabdi Ismaaciil Samatar.
Muddo aan ka yareen sanado ayuu Guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi wajahayaa cadaadis badan oo keeni kara in xaaladda halkaan ka sii fogaato waxaana lagu baaqayaa in si deg deg ah loo xaliyo cabashadiisa.
Previous articleYaa ka dambeeya dagaal beeleedyada ka socda Galgaduud iyo Mudug?
Next articleWaa kuma madaxweynaha cusub ee la doortay ee maamulka HirShabeelle?
Maleeshiyaad hubeysan oo dil & dhaawac haween ugu geystay Galgaduud
Wararka laga helayo gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xalay maleeshiyaad hubeysan ay weerar ka geysteen gobolkaasi. Weerarka oo ka dhacay duleedka deegaanka Xananbuure ayaa waxaa...
Jawaari iyo dhinacyo kale oo miisaan culus oo ku biiray shirka...
Maxay tahay sababta Aadan Xeefow looga reebay dhaarta xildhibaanada HirShabelle?
Ra’iisul wasaare Abiy oo ku dhowaaqay go’aan uga sii dari kara
Wararkii ugu dambeeyey askari qoyskiisa ku qarxiyey Muqdisho iyo khasaaraha ka...
Saudi Arabia: Saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca oo loo xiray eedeymo...
DF oo qorsheyneysa inay dhisto maamul cusub oo Jubaland ah +...
Beesha Caalamka oo war kasoo saartay kulankii ay la qaateen madaxweyne...